Orinasa sinoa tsara indrindra namboarina vola madinika metaly euro avo lenta, mari-pamantarana fiantsenana fivarotana fivarotana lehibe, mpanamboatra rojo vy fanoratana trolley mpanamboatra sy orinasa | Hobrin
Orinasa sinoa namboarina vola vy euro avo lenta, marika fivarotana fivarotana lehibe, keychain fanontana trolley
● Fanodinana: fanontana 4-loko. Famonoana / famoahana / famonoana ho faty
● Fitaovana: Varahina / Vy vy
● habetsany: tsy misy fari-pitsipika farafahakeliny farafaharatsiny
● Fametahana: volamena / volafotsy / nikela / rhodium / namboarina, sns.
● Eo aloha: logo vita pirinty CMYK, fonosana resin epoxy
Lafiny aoriana: Etched recessed ho loko. Fanamarihana laser.
● Fitaovana: Aperture
Rehefa miantsena any amin'ny supermarket isika dia mila mandoa ny sarety miantsena, izay tsy mitombina. Izahay dia mamolavola ity vokatra ity izay afaka manampy anao hanokatra ny kalesy fiantsenana. Mila mampiditra ny lakilen'ny lakilen'ny fiantsenana ianao ary mamadika azy hampiasa ny sarety fiantsenana mivantana nefa tsy mandoa sarany fanampiny. Manantena izahay fa ny olon-drehetra dia hanana fanalahidy sy zony hampiasa malalaka ny sarety.
Fivarotana trolley fandefasana trosily + coin (token) napetraka-na aiza na aiza, efa nitady vola madinika na token ianao hahazoana trolley fiantsenana? Aza manahy intsony! Ny lakilen'ny trolley miantsena natokana ho azy dia ny safidinao tonga lafatra, izay afaka mamoaka ny "hidin-trano eo aloha" rehetra nefa tsy tafahitsoka. Azo ampiasaina amin'ny trolley fiantsenana taloha misy "lock drawer".
Ny keychain dia vita amin'ny fanontana vy. Ny etỳ ivelany dia mandray ny fizotran'ny fanontana matte ary ny lamosina dia voasokitra tamin'ny laser mba ho lamaody kokoa ny lakile. Ny habe dia toy ny lakile mahazatra, mety tsara amin'ny peratra fanalahidy.
Ny volanay dia vita amin'ny firaka zinc / varahina / vy tsy misy fangarony, ny lafiny roa dia azo atao amin'ny endrika manokana ilainao
Mora ampiasaina: ampidiro ao anaty loaka ny lakile fa tsy vola madinika, avy eo avadiho sisiny ary avoakany. Noho ny endriny tsy manam-paharoa dia mora kokoa ny misintona ny lakile ary tsy hianjera noho ny maodely mahazatra misy tendrony "boribory".
Fanomezana tany am-boalohany ho an'ny rehetra: ny lakilen'ny fiantsenana dia tena azo ampiharina amin'ny fiainana isan'andro, ary mety tsara koa ho an'ny fanomezana kely ho an'ny fianakaviana na namana. Maharitra kokoa izany ary hahatsiaro anao foana ny namanao / mpiara-miasa aminao rehefa miantsena ianao: -)
Manome lanja lehibe ny fahafaham-po sy ny kalitaon'ny mpanjifa izahay. Manana traikefa mihoatra ny 10 taona izahay, raha misy hevitra, manorata aminay. Averinay ho zava-misy ny hevitrao!
Teo aloha: Mpamatsy vola fanao fahatsiarovana vy natokana ho an'i China